Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool waddamada Yurub, America, iyo Australia, ayaa qaarkood carruurta ula guura dalalka Africa iyo kuwa islaamka, iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, iyo in sidoo kale ay carruurtoodu bartaan ku hadalka afka Soomaaliga.
Haddaba waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalalka Galbeedka maka mira dhaliyaan rabitaankoodaas ah in carruurtoodu noqoto kuwa ku barbaarta diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliga, kuna hadasha afka Soomaaliga?
Waxaan toddobaadkan aan barnaamijka Qoyska idinu haynaa sheekada hooyo Baarliin Xasan oo carruurteeda laba bilood ka hor kala guurtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka una guurtay dalka Masar, balse hadda qorsheyneysa in ay dhowaan dib ugu soo noqoto Minneapolis. Barnaamijka ayay ku faah faahineysaa sheekadeeda.
Dhaeyso barnaamijka oo dhameystiran oo ay diyaarisay Caasho Ibrahim Aden.